जब विवाहमा पूर्व प्रेमिका दुलही बनेर मण्डपमा आइन् ! भयो यस्तो सम्म….. « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । चीनमा एउटा यस्तो अनौठो र रोचक घटना भएको छ । त्यहाँको एक विवाहमा विवाह गर्न लागेका व्यक्तीकी पुर्व प्रेमिका विवाहको पहिरनमा आएर प्रेमीसँग माफी माग्दै विवाहका लागि अनुरोध गरेकी छिन् ।
उक्त विवाहको एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । सामाजिक संजाल फेसबुकको माध्यमबाट भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । भिडियोमा विवाह गरेर किस गर्न लागेका जोडीकाबीचमा ति प्रेमीका आएर उनको खुट्टा समाउँन लागेको देखिन्छ । उनले आफ्ना पुराना गल्तीहरुको माफी माग्दै आफुसँग विवाह गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
यो पनि यी पुरुषले एक्लै हिँड्ने महिलालाई समातेर किस खाईदिहाल्थे संसारमा प्रत्येक दिन केहि न केहि अनौठा घटनाहरु भएकै हुन्छन् । यस्तै एउटा अनौठो घटना भारतको मुम्बईमा पनि भएको छ । मुम्बईमा एक युवक महिला वा युवतीहरुलाई किस गर्ने र फरार हुने गरेको खबर सार्वजनिक भएको हो ।
तर अहिले पुलिसले उक्त युवकलाई गिरफ्तार गरेको छ । मुम्बईको माटुंगा र आसपासका मानिसहरु उक्त युवक देखि हैरान थिए । ति व्यक्ति मुम्बईको दादर र माटुंगा रेल्वे स्टेशनकोबीचमा पर्ने एउटा पुलबाट हिँड्ने महिला तथा युवतीहरुलाई किस गर्ने गर्दथे । त्यसैले त्यहाँबाट हिँड्ने मानिसहरु त्यो युवकबाट हैरान भईसकेका थिए । मानिसहरु आफ्नो बद्नाम हुने डरले प्रहरीकोमा जाँदैन थिए । त्यसैले ति व्यक्ति पुलबाट हिँड्ने जो कोहि पनि महिला तथा युवतीहरुलाई किस गर्दथे ।
जब कसैले प्रहरीसँग त्यसो भइरहेको बारे कसैले हल्ला गर्यो तब प्रहरीले सिसि क्यामेरामा त्यहाँको फोटो हेर्यो । नभन्दै त्यस पुलबाट एक्लै हिँड्ने महिलाहरुलाई ति व्यक्ति किस गर्दथे र भाग्थे । त्यसपछि प्रहरीले ति व्यक्तिलाई समात्ने प्लान बनायो र चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा गिरफ्तार गर्यो । ति व्यक्तिको नाम हबिबुर खान रहेको छ । उनी ३२ वर्षका भएका छन् ।
एउटै आलुलाई १२ करोड ! काठमाडौं । एक आइरिस सेलिब्रेटी फोटोग्राफरले आइरिस आलूको फोटो १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । केबिन एबोसले आफूले अर्गानिक आलूको फोटो एक अज्ञात युरोपेली व्यवसायीलाई बिक्री गरेको पुष्टि गरेका हुन् ।
उक्त फोटो २०१० मा खिचिएको थियो । त्यसको पोर्टफोलियो सटिबन सपिलबर्ग, माइलक पेलिन, फेसबुकको शेरिल स्यान्डवर्ग तथा मलाला यसूफजईमा पनि समावेश छ । आलूको प्रिन्टको तीन भर्सन रहेको छ । आलुको एक भर्सन फोटोग्राफरको निजी संग्रहमा राखिएको छ । अर्को फोटो भने उनले सर्भियाको एक म्यूजियममा दान गरेका छन् र तेस्रो अज्ञात व्यवसायीलाई बिक्री गरेका छन् । कसैले आफ्नै घरबाट कलाकृति खरिद गरेको यो पहिलो पटक नभएको एबोशले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्याम सँग उनले व्यापारीसँगै बसेर दुई ग्लास वाइन पिएको पनि बताएका छन् । वाइन पिउँदाको समयमै व्यापारीले आफ्नो पेन्टिङ मन पराए पछि पेन्टिङ बेचेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामलाई केबिन एबोसले बताएका हुन्।
जहाँका पुरुषले दुईवटा विवाह नगरे जेल जानुपर्छ – काठमाडौं । हाम्रो देशमा बहुविवाह कानूनतः प्रतिबन्धित छ र एकभन्दा धेरै श्रीमती बनाउने पुरुषलाई सजाय पनि हुन्छ । तर अफ्रिकी देश इरिट्रियामा दुई जना महिलासँग विवाह नगरे सजाय मिल्ने कानून रहेको छ । इरिट्रियामा हरेक पुरुषले कम्तीमा २ जना महिलासँग विवाह गर्नैपर्दछ । इरिट्रियामा महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसंख्या निकै कम छ ।
सोही कारण सरकारले सबै पुरुषलाई दुईजना महिलासँग विवाह गर्नैपर्ने कानून बनाएको हो। कुनै पनि महिला अविवाहित बस्नु नपरोस् भन्ने मनशायले सरको यस प्रकारको अनौठो कानूनको निर्माण गरेको हो। कानूनको उल्लंघन गरी दुईवटा विवाह नगर्ने पुरुषलाई जेलको सजाय हुन्छ ।
पुरुषलाई मात्र सजाय हुने होइन, महिलालाई पनि यदि पहिलो श्रीमतीको रुपमा विवाह गरेर भित्रिएका कुनैपनि महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेमा त्यस्ता महिलालाई पनि सजाय हुने कुरा कानूनमा उल्लेख छ । श्रमिानलाई दोश्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने महिलालाई जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने प्रावधान कानूनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्याममा उल्लेख छ । एजेन्सीको सहयोगमा
रातिदेखि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा भी’षण आ’गलागी, पानी खसाउँदै सिम्रिक एयर